Masar Oo Abuureysa Xulufo Cusub Oo Ka Dhan Ah Turkiga | Hangool News
Masar Oo Abuureysa Xulufo Cusub Oo Ka Dhan Ah Turkiga
Hangoolnews:- Masar ayaa taageero ka raadineysa dalal carbeed oo deris la ah, oo ay ku jiraan Jordan iyo Maamulka Falastiin, si ay u waajahdo muranka kala dhexeeya Turkiga.
Waxay labadoodu ka wada-hadleen isbedeladii dhowaan ka dhacay ee gobolka, iyagoo diiradda saaray qorsha Israa’iil ee goosashada qaybo ka mid ah Daanta Galbeed iyo, sidoo kale xidhiidhka u dhexeeya Maamulka Falastiin iyo Masaarida.
Sida uu wariyay Jerusalem Post, saraakiil ka tirsam Maamulka Falastiin ayaa shaaca ka qaaday in booqashada Shukri lagaga wada-hadlay xiisadda ka taagan Liibiya ee u dhaxaysa Masar iyo Turkiga.
Masar waxay raadisay taageerada Falastiin iyo dalal kale oo Carbeed. Waxaana la sheegay in maamula Falastiin uu taas diiday sababo la xidhiidha in Masar ay ku guul-darreystay in ay Falastiiniyiinta ku taageerto dadaalkooda ka dhanka ah qorsha dhul goosiga Israa’iil iyo “Heshiiska Qarniga” ee Maraykanka.